Osmino Download - Free Wi-Fi Lite ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » Osmino - Free Wi-Fi Lite ကို
Osmino - Free Wi-Fi Lite ကို APK ကို
osmino: အခမဲ့ Wi-Fi Lite ကို - ဒဏ္ဍာရီ app ကို osmino Wi-Fi ၏ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း။ ဒါဟာကမ္ဘာတဝှမ်းအခမဲ့ Wi-Fi access ကိုဖြစ်ပါသည် - ထက်ပိုမို 20 သန်း Wi-Fi Hotspots ။ ဒီလွယ်ကူသော Wi-Fi-မန်နေဂျာ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုအလိုအလျှောက်အခမဲ့ Wi-Fi join နှင့်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက Wi-Fi ကွန်ရက်များမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အလိုအလျောက်ရှာဖွေရေးနှင့်အများပြည်သူ Wi-Fi ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူစတင်ပါ။ မည်သည့်ရှုပျထှေး setting များကိုမဟုတ်သလိုအသုံးအနှုန်းများမရှိပါ။ သငျသညျရရှိနိုင် Wi-Fi တစ်ခုအလိုအလျောက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရ map.You ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wi-Fi ဟော့စပေါ့ပေါ်အနီးဆုံးလူထုဟော့စပေါ့စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် parameters တွေကိုနှင့်ကွန်ယက် settings ကိုသိရန်မလိုဘဲ - osmino Wi-Fi သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးဟုလူသိများ Wi-Fi ကွန်ယက်စကားဝှက်ဝေမျှနှင့်အခြား osmino အသုံးပြုသူများကရရှိနိုင်ပါစေရုံ "Share" ကိုရွေးချယ်ပြီး check box ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်သဘောတူနိုင်သည်။
အများပြည်သူဟော့စပေါ့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုအလိုအလျောက်အသုံးပြုသူများသည် '' devices များထံမှလက်ခံရရှိသောအချက်အလက်များအရသိရသည်မြေပုံပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်အများပြည်သူကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာတွင်ကွန်ယက်တည်နေရာ, အမည်နှင့်လက်လှမ်း settings ကိုခံယူခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်မြေပုံပေါ်တွင်ပြပါ။
ဒါကကျနော်တို့အသုံးပြုသူများသည် '' ဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးပြုမှု-သက်သေပြအများပြည်သူ Wi-Fi ဟော့စပေါ့မြေပုံကိုဖန်တီးဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုအသုံးပြုသူများအ osmino စာရင်းသွင်း, ပိုတစ်ခါသုံး Wi-Fi Hotspots မြေပုံပေါ်တွင်ပေါ်လာပါသည်။
20 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် osmino မြေပုံပေါ်တွင်နီးပါး 000 000 50 Wi-Fi Hotspots ပြီးသားရှိပါတယ်။
USA တွင်3000 000 ဟော့စပေါ့ထက်ပို
ကိုရီးယား3000 000 Wi-Fi Hotspots ကျော်
မက္ကစီကိုနှင့်ဘရာဇီး 600 000 ကျော်နီးပါး 400 000 ဟော့စပေါ့
ရုရှား၌စကားဝှက်များနှင့်အတူထက်ပို 1.5 သန်းဟော့စပေါ့
ယူကရိန်းနှင့် ပတ်သက်. 170 တထောင် Wi-Fi Hotspots
အီတလီ၏မြေပုံပေါ်တွင် 400 000 ဟော့စပေါ့,
စပိန်၏မြေပုံပေါ်တွင် 200 000,
ပြင်သစ် 550,000 ဟော့စပေါ့ထက်ပိုရှိပါတယ်,
ဂျာမနီ - 350 000
အိန္ဒိယတွင် 100 000 Wi-Fi Hotspots အကြောင်းကို
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် 300 000 wifi အစက်အပြောက်ထက်ပို
ကိုလံဘီယာအတွက် 50 000 ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်အကြောင်းကို,
တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်တူရကီနိုင်ငံ 100 000 ဟော့စပေါ့,
ဂျပန်မြေပုံပေါ်တွင်စကားဝှက်များနှင့်အတူ 550 000 Wi-Fi Hotspots ထက်ပို။
6.45 ကို MB